नेकपाको ‘महाधिवेशन स्टन्ट’ – AayoMail
नेकपाको ‘महाधिवेशन स्टन्ट’
आयाेमेल संवाददाता २०७७ साउन ६ गते १३:३९
धेरै दिनदेखि चरम कलहबाट गुज्रिरहेको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो साता एउट 'तुरुप' फाले 'मंसिरमा महाधिवेशन गरौं।'
त्यसपछि नेकपाभित्रका अरु मुद्दा किनारा लागे र अब विवादको मुद्दा बनेको छ- महाधिवेशन।
यद्यपि पार्टिभित्र महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत छन्। तर ओलीले भनेजस्तै मंसिरमै महाधिवेशन कति सम्भव छ? नेकपाभित्र बहसको विषय अब यतातिर केन्द्रित हुन थालको छ-
संकट टार्ने बहाना- लिलामणि पाेखरेल, स्थायी समिति सदस्य
स्थायी समिति सदस्य लिलामणि पोखरेलले तीन महिनाभित्र कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन हुनै नसक्ने तर्क गरेका छन्। ‘पार्टी एकीकरणको टुंगेको छैन, स्थानीय तहदेखि सम्मेलन गरेर आउनुपर्ने हुन्छ, साउन-भदौ बर्खामासमा कामकाज हुनसक्दैन,’ उनले भने,‘अनि कुन हिसावले महाधिवेशन हुनसक्छ।’
पोखरेलका अनुसार ‘यो प्रस्ताव वास्तविक समस्या पन्छाएर यथास्थितिमा राख्ने स्टन्टबाजी मात्रै हो।’
पोखरेलले पार्टीमा आफू कसैको समर्थक वा विरोधी नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओली पार्टी संयन्त्रसँग संवादमै आउन नचाहेर समस्या जटिल बन्दै गएको बताए।
‘बैठकमा आएर कुरा गरे पो दुई पद वा एक पद, कहाँ कसरी के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। नआएपछि के गर्ने?,' उनले थपे।
शनिबारको सचिवालय बैठकमा ओलीले महाधिवेशन छिटोभन्दा छिटो गरी निकास दिने प्रस्ताव राख्दा प्रचण्डले तत्काल सहमति जनाएका थिए। त्योभन्दा पहिला नै ओली र प्रचण्डबीच छुट्टै छलफल भई सहमति भएको देखिएपछि माधव नेपाललगायतले त्यसमा आपत्ति जनाएका थिए।
जत्ति गरे नि मंसिरमा हुँदैन- सुरेन्द्र पाण्डे, स्थायी समिति सदस्य
गएको माघमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले १५ दिनभित्र एकताको बाँकी सारा काम सक्ने निर्णय गर्यो। ६ महिना बित्यो, फुट्टी केही काम भएको छैन।
अब ३ महिनामा महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ। यसमा म अचम्भित छु। हवाई जहाजको गतिमा काम भए पनि मंसिरमा महाधिवेशन हुन सक्दैन। बर्खा, चाडपर्व चलिरहँदा वडा तहसम्मको पार्टीपंक्ति कसरी महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न सक्छ?
सदस्यताको टुंगो, सम्मेलन आयोजना, वैचारिक वहसलगायतका आधारभूत तयारीबिना कसरी महाधिवेशन हुनसक्छ? यसपालि त भाइटीका नै मंसिर १ गते, लगत्तै छठपर्व। त्योभन्दा यता कुनै काम हुनसक्ने गुन्जाइस देखिँदैन।
चमत्कारिक गतिमा तयारी अगाडि बढाउने नै हो भने तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक हुनुपर्ने हो। यो कसरी सम्भव होला र?
यो त छल्ने बहानामात्रै भयो- अष्टलक्ष्मी शाक्य, स्थायी समिति सदस्य
(आयाेमेलले गरेकाे कुराकानीका आधारमा)